'हामी खुसीले ग्राउन्डमै रोयौं' - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»खेलकुद»‘हामी खुसीले ग्राउन्डमै रोयौं’
नामिबियामा गत हप्ता सम्पन्न आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन दुई प्रतियोगितामा उपविजेता बन्दै नेपाली टोली एकदिवसीय विश्वकपको छनोट खेल्न जिम्बावे जाने तयारीमा छ । डिभिजन दुईमा नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल क्यानडासँग खेल्नुपर्ने थियो । उक्त खेल जिते नेपालले विश्वकप छनोटमा प्रवेश पाउँथ्यो भने हारले डिभिजन दुईमै रहनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो ।
महत्वपूर्ण उक्त खेलमा एक सय ९५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले एक सय ४४ रनमै नौ विकेट गुमाउन पुग्यो । तर, करन केसी र सन्दीप लामिछानेले अन्तिम विकेटका लागि ४७ बलमा ५१ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई एक विकेटको सानदार जित दिलाए । आफ्नो मुख्य भूमिका बलिङ भए पनि करनले ३२ बलमा ४२ रनको उत्कृष्ट पारी खेले । उनै करनलाई गृह जिल्ला बागलुङ, पोखरा र म्याग्दीमा विभिन्न संघसंस्थाले भव्य सम्मान गरेका छन् । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि डिभिजन दुईकै सेरोफेरोमा अन्नपूर्णकर्मी गोपाल छन्त्यालले करनसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
क्यानडासँगको खेलमा आठौं विकेट पतनपछि पनि खेल जिताउँछु जस्तो लागेको थियो ?
म क्रिजमा जाँदा हाम्रो आठ विकेट गुमिसकेको थियो । क्रिजमा आरिफ राम्रोसँग खेलिरहेका थिए । मैले सोचेको थिएँ, मैले जस्ट उसलाई साथमात्र दिने हो । उसैले खेल जिताउँछ । तर, दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले आरिफ पनि आउट हुन पुगे । त्यसपछि सन्दीप लामिछाने क्रिजमा आए । सन्दीप र मैले सल्लाह गर्‍यौं, विकेट नगुमाउने र बान्ड्री लगाउने । सन्दीपलाई मैले भनेँ, तिमी आफ्नो विकेट नगुमाऊ, म बाउन्ड्री हान्छु । त्यसपछि बाउन्ड्री पनि लाग्दै गयो र मेरो कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्दै गयो ।
आरिफ आउटपछि कत्तिको दबाब महसुस भयो ?
आरिफ क्रिजमा जमिसकेका थिए । तर, उनी आउट भएपछि मैले निकै दबाब महसुस गरेँ । गेम जिताउँछु भन्ने लागे पनि सुरुमा अलि नर्भस नै भएँ । त्यसपछि सुरुमै दुईवटा बान्ड्री लगाएपछि मैले सोचेँ, अब गेम जसरी पनि जिताउँछु । त्यतिबेला सन्दीप पनि निकै प्रेसरमा देखिन्थे । खेल्दै गयौं, सन्दीपले पनि राम्रो साथ दिए । त्यसको परिणाम हो, मैले आफ्नो खेल देखाउन पाएँ र नेपाललाई जित पनि दिलायौं ।
अन्तिम ओभरमा जितका लागि आठ रन चाहिएको थियो । तर, सुरुकै चार बल डट भएपछि बान्ड्री हान्छु जस्तो लागेको थियो?
सन्दीप र मेरोबीचमा राम्रो पार्टनरसिप भइरहेको थियो । मेरो मनोबल लेभल पनि उच्च भइसकेको थियो । त्यसैले चार बल डट भए पनि नर्भस भएको थिइन् । मेरो जोनमा बल आउनेबित्तिकै बाउन्ड्री हान्छु भनेर सन्दीपलाई पनि भनेको थिएँ ।
क्यानडाका बलरले उक्त ओभरको सुरुका चार बल निकै राम्रो लाइनमा फालेका थिए । पाँचौं बल मेरै जोनमा आयो र मैले छक्का हाने, त्यसपछि भने गेम जित्यौं जस्तो लागिसकेको थियो ।
खेल जितेपछि कोच, कप्तान र सहकर्मीबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
क्यानडासँग त्यो महत्वपूर्ण गेम जितेपछि कोच, कप्तान र अन्य साथीहरू आएर म र सन्दीपलाई उचाल्नुभयो । हामी सबै ग्राउन्डमै रोयौं, किनकि त्यो जितले हामी एकदिवसीय विश्वकप छनोट खेल्न पाउने अवस्थामा पुगेका थियौं । हारेको भए हामीले धेरै कुरा गुमाउने थियौं ।
नेपाली क्रिकेटको सपना भनेकै विश्वकप हो । त्यहाँसम्म पुग्न डिभिजन दुईमा हामी जसरी पनि शीर्ष दुईमा अटाउनुपर्ने थियो । त्यो जितले हामीलाई सम्पूर्ण खुसी दिएको थियो । हामी सबैको आँखाबाट खुसीको आँसु आएको थियो । त्यो खुसीको आँसुको एउटा पक्ष आफूलाई बनाउँदा पाउँदा निकै आनन्दको अनुभव भयो । त्यो क्षण म जीवनभर भूल्न सक्दिनँ ।
आफ्नो क्रिकेट करिअरलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा क्रिकेटको क्रेज निकै बढेको छ । क्रिकेट खेल अझै माथि जाने सम्भावना छ । त्यसका लागि सबैको साथ अपरिहार्य छ । म आफ्नो करिअरबाट निकै सन्तुष्ट छु । देशका लागि क्रिकेटबाट धेरै योगदान दिने योजना छ । क्यानडासँगको त्यो खेल मेरो करिअरकै उत्कृष्ट प्रर्दशन हो जस्तो लाग्छ । आगामी दिनमा पनि नेपाली क्रिकेटमा यस्तै योगदान गर्न आतुर छु ।
नेपालको विश्वपक छनोट सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामीले डिभिजन दुईमा उत्कृष्ट खेल पस्कियौं । यसलाई निरन्तरता दिनसके हामीले धेरै टिमलाई टक्कर दिन सक्छौं । यो लेभलको टुर्नामेन्टमा कुनै पनि टिम हार्नका लागि आएका हुँदैनन् । अरू टिमले पनि उच्च लेभलको क्रिकेट खेलिरहेका छन् । जिम्बावे र अफगानिस्तानले भर्खर एकदिवसीय सिरिज खेलका छन् । त्यसैले हामीले पनि छोटो अवधिमा राम्रो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खेलमा हारजित स्वाभाविक हो । तथापि हामी यो लेभलमा जितकै लागि खेल्नेछौं, आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएर । टिमका सम्पूर्ण सदस्यको एकअर्काप्रति बलियो विश्वास पनि छ, यो सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले जिम्बावेमा पनि हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्नेछौं र विश्वकपमा छनोट हुनेछौं ।
कपिलवस्तुमा खेलकुद तालिम